ပင်ပန်းပြီးအိပ်နေတဲ့ ချစ်သူကို အပူတိုင်းစက်နဲ့ တိုင်းပေးနေပုံကို စနောက်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဗီဒီယို – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရဟိတ အလုပ်တွေကို နေ့မအား ညမနားဆောင်ရွက် နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ နောက်ကွယ် မှာ သူမကို လိုအပ်တာတွေ ကူညီပေးနေသူ တစ်ဦးရှိပါတယ်နော်။ သူကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ တစ်ဦးသော ချစ်သူဖြစ်ပါတယ်နော်။ ခိုင်နှင်းဝေ ဘာပဲလုပ်လုပ် နောက်ကနေ ပံ့ပိုးပေးနေတာကို အမြဲမြင်တွေ့ရပါတယ်နော်။
ခိုင်နှင်းဝေဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကံနဲ့ အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းတတ်ပေမယ့် ဒီတစ်ခေါက် မှာတော့ တကယ့် အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီလား လို့တောင် ပရိသတ်တွေ ထင်ကြေးပေးခံ နေရပါပြီနော်။ ချစ်သူကို ရုပ်တည်နဲ့ စတတ်တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေတစ်ယောက် အခုတစ်ခါလည်း ဆေးထိုးလိုက်ပြန်ပါပြီနော်။
ပင်ပန်းပြီး အိပ်နေတဲ့ ချစ်သူကို ဗီဒီယိုရိုက်ပြီး ဆေးထိုးလိုက်တာပါနော်။ အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ….
ပငျပနျးပွီးအိပျနတေဲ့ ခဈြသူကို အပူတိုငျးစကျနဲ့ တိုငျးပေးနပေုံကို စနောကျဆေးထိုးလိုကျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ဗီဒီယို
ပရိသတျကွီးရေ ပရဟိတ အလုပျတှကေို နမေ့အား ညမနားဆောငျရှကျ နတေဲ့ သရုပျဆောငျ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ နောကျကှယျ မှာ သူမကို လိုအပျတာတှေ ကူညီပေးနသေူ တဈဦးရှိပါတယျနျော။ သူကတော့ ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ တဈဦးသော ခဈြသူဖွဈပါတယျနျော။ ခိုငျနှငျးဝေ ဘာပဲလုပျလုပျ နောကျကနေ ပံ့ပိုးပေးနတောကို အမွဲမွငျတှရေ့ပါတယျနျော။
ခိုငျနှငျးဝဟော အိမျထောငျရေး ကံနဲ့ အခဈြရေးမှာ ကံမကောငျးတတျပမေယျ့ ဒီတဈခေါကျ မှာတော့ တကယျ့ အခဈြစဈကို ရှာဖှတှေရှေိ့သှားပွီလား လို့တောငျ ပရိသတျတှေ ထငျကွေးပေးခံ နရေပါပွီနျော။ ခဈြသူကို ရုပျတညျနဲ့ စတတျတဲ့ ခိုငျနှငျးဝတေဈယောကျ အခုတဈခါလညျး ဆေးထိုးလိုကျပွနျပါပွီနျော။
ပငျပနျးပွီး အိပျနတေဲ့ ခဈြသူကို ဗီဒီယိုရိုကျပွီး ဆေးထိုးလိုကျတာပါနျော။ အရမျးခဈြကွတဲ့ ခဈြသူနှဈဦးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ….
စစ်ကောင်စီက အာဏာမသိမ်းခင်က သားငယ်လေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့တာကို သတိရလွမ်းဆွတ်ရင်း ပြန်လည်ပြသလာတဲ့ မင်းမော်ကွန်း